१५ बर्षको उमेरमा नै सेक्स भयो, मोडल नैनाश्री राना::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
१५ बर्षको उमेरमा नै सेक्स भयो, मोडल नैनाश्री राना
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बिहिबार, कार्तिक ४, २०७३
पछिल्लो समय नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने धेरै नयाँ मोडलहरु आफ्नो करियर बनाउन यसक्षेत्रमा लागेका धेरै भेटिन्छन् ।
तर करियरको लागि यसक्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपनि यसक्षेत्रमा भविष्य छैन भन्दै मोडलिङ् क्षेत्रको सपना पनि देख्न छाडिसकेका छन् धेरैले ।
तर यति बेला मोडलिङ क्षेत्र छोड्नेको संख्या भन्दा पनि भित्रिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । यस्तै भिडकी एक नव मोडल यसक्षेत्रमा करियर खोज्दै भित्रिएकी छन् । ती मोडल हुन्, नैनाश्री राना ।
धरानमा जन्मिएर हाल काठमाडौंको कपनमा बसोबास गर्दै आएकी नैनाले यसक्षेत्रमा मात्र २/३ महिना विताएकी छिन् । यति छोटो समयमा धेरैको धेरै थरी कुरा सुनिसकेकी बताउने नौना भविष्यमा राम्रो कलाकार बन्ने सोचाइमा छिन् ।
सानैदेखि अभिनयको सोख चढेको बताउने नैनाले २/३ महिनाको अवधिमा एउटा म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी छन् । गीतकार माधव निर्दोष र संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको ‘आत्मीयता’ एल्बममा समावेश भएको नरेन्द्र प्यासीको स्वरवद्ध गीत ‘तिमीबाट टाढा हुँदा’ बोलको गीतमा नैनाले अभिनय गरेकी छन् । उनै मोडल नैनाश्री रानासँगको कुराकानी :
अहिले अरु गीतहरुको म्युजिक भिडियोमा व्यस्त छु ।
कति भयो यसक्षेत्रमा प्रवेश गरेको ?
यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको त्यहि दुई तीन महिना भयो ।
कति वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नुभएको छ ?
मेरो पहिलो म्युजिक भिडियो नै आत्मीयता एल्बममा समावेश भएको नरेन्द्र प्यासीले गाउनु भएको ‘तिमीबाट टाढा हुँदा’को गीत नै हो ।
के चढ्नु हुन्छ ? गाडी, स्कुटी वा सार्वजानिक गाडी नै !
म सार्वजानिक गाडी नै हिड्छु ।
अहिले अन्तरवार्ता लिइरहेको अबस्थामा तपाईसँग कति हजार सम्मको गरगहना र लुगा छ ?
अहिले त मैले धेरै बोकेको छैन् । तपाई नै अनुमान लगाउनु न ।
तपाईको साथमा कति रुपैयाँ जति पैसा पर्समा कहिले छुट्दैन् ?
तीन चार हजार जति ।
तपाईलाई आफनै अंग सबैभन्दा सेक्सी लाग्ने ?
सबैले भन्नु हुन्छ मेरो व्रेस राम्रो छ भनेर मलाई पनि मेरो व्रेस नै राम्रो लाग्छ ।
एउटा म्युजिक भिडियो खेल्दा त्यस म्युजिक भिडियोका निर्माता, निर्देशकले एउटा मोडलसँग के अपेक्षा गरेका हुन्छन् ?
धेरैले अभिनय राम्रो गरे हुन्थो सोच्छन् भने धेरैले अभिनयलाई सेक्समा तुलना गर्ने गर्छन् ।
तपाईलाई कसैले म म्युजिक भिडियो वा फिल्म खेलाइदिन्छु म सगँ सेक्स गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताब राखे की राखेनन् ?
धेरैले राखे । नाम चाँही भन्न चाहदिन । तर म अभिनय सेक्समा साट्ने केटी होइन् ।
सेक्स के हो त ?
एउटा मान्छेलाई अति नै आवश्यक पर्ने चिज हो ।
सेक्सको अनुभब छ तपाईलाई ?
कति बर्षको उमेरमा ?
१५ बर्ष जति भएको थिए होला ।
को सँग भएको थियो ?
मेरो व्याईफ्रेण्डसँग ।
कस्तो हुदो रैछ पहिलो सेक्सको अनुभव ?
निकै रमाइलो ।
तपाईले कुनै पनि ब्लुफिल्म हेर्नु भएको छ ?
हेरेको छु एक जना साथीले देखाएको थियो । धेरै पहिला ।
अहिले हेर्ने गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
अहँ हेर्दिन ।
तपाईलाई कसैले म यति सम्म पैसा दिन्छु मसगँ सेक्स गर्नुपर्छ भनेर सेक्सको प्रस्ताव राखे भने तपाई के गर्नु हुन्छ ?
म हुदैन भन्छु । म पैसाका लागी सेक्स गर्दिन । सेक्स त मन मिल्ने मान्छेसँग मात्र गर्छन् ।
नेपाली कुन सेलिव्रेटिले सेक्सको प्रस्ताब राखे भने तपाई सेक्स गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
मैले भनी हाले नि, म मन मिल्ने मान्छेसँग मात्र सेक्स गर्छु ।
नेपाली नायक मध्य सेक्सी लाग्ने नायक ?
जीवन लुईटेल ।
अन्ततः तपाईलाई १० बर्षपछि कहाँ देख्न पाइने छ ?
एउटा राम्रो कलाकार भएको ।
केही भन्न चाहनु हुन्छ आमदर्शक तथा पाठकलाई ?
म मेहनत गर्छु, मैले गरेको हरेक कामहरुलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला भन्न चाहन्छु ।
झलनाथ खनालको उद्घोष, ‘पार्टीको नेतृत्वका लागि मै पनि आँट गर्न सक्छु’
साध्यवहादुर भण्डारीको गर्जन: केपी ओली प्रधानमन्त्रि बनेपछि भारतको सिमानामा तारबार लाग्नेछ, वाधहरु भत्कनेछन्
राति ट्याक्सी चढ्ने युवती ड्राइभरलाई भन्छन्, ‘पैसा छैन, बरु सेक्स गर’ [ अन्तरबार्ता ]
‘मैले ओली र प्रचण्ड अभिभावक भएर बस्नुपर्छ भनेकै हो’
‘मण्डपमा घुम्टो ओढेर बिहे गर्ने मन छ’ : नायिका रजनी केसी
काठमाडाै‌ महानगरका मेयरलाई उपमेयरकाे प्रश्न- मेयर सावले गर्न खाेजेकाे केहो ? [ अन्तर्वार्ता ]